SH.SHIRIIF OO DALBADAY IN 3 HOGAAMIYE LA QORO IN AY YIHIIN ARGAGIXISO CALAMI AH | Toggaherer's Weblog
Germany 17 Feb 2009 ToggaHerer
Ilo wareedyo uu helay wargeyska Alsharqul Awsat ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu dhawaan fariimo qoraal ah uu u diray madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo xog hayaha guud ee qaramada Midoobay taasi oo uu ku dalbanayo in xubno ka tirsan kooxo diimeedyada Soomaaliya oo Mareykanka liiska Argagixisada ugu jira in laga saaro .
Xubno ku dhow-dhow madaxweyne Sheekh Shariif oo diiday in magacooda la soo xigto ayaa sheegay in madaxweynuhu uu fariimo qoraal ah u diray Madaxweynaha Mareykanka , Xog hayaha guud ee Qaramada midoobay iyo Midowga Africa taasi oo ku aadan in dib looga laabto go`aankii xubno islaamiyiin ah loogu daray liiska argagixisada iyadoo uu sheegay in xubnahaaasi fursad loo siiyo in ay ku soo biiraan hanaanka geedi socodka nabadda Soomaaliya .
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in m/weyne Sheekh Shariif uu doonaya in laga gudbo caqabadaha Islaamiiyinta mayalka adag in ay wada shaqeeyn dowlada cusub ee Soomaaliya la yeeshaan sida wargeyska Afka Carabiga ku hadla ee Sharqul Awsat laga soo xigtay .
Xubnaha uu doonayo in liiska argagixisada laga saaro hogaamiyahaan qunyar socodka ah ayaa waxaa ka mid ah Sheekh Xasan Daahir Aweys , Xasan Turki Iyo Muqtaar Rooboow Abuu Mansuur, waxaana lagu waramay in weli wax jawaab ah oo rasmi ah uusan madaxweynaha helin .
Umuurtaan ayaa soo baxeysa xilli dhawaan warar si hoose saxaafada loogu soo dusiyay ay sheegeen in Sheekh Shariif uu Muqdisho kula kulmay Xasan Turki iyo Abuu Mansuur, inkastoo Abuu Mansuur war ka soo yeeray uu gaashaanka ugu daruuuray la kulanka m/wyen Shariif.
Togaherer Xasan Maxamed Abdi